शंकर उप्रेती, जसले मोबाइल एपबाट संसारका नेपालीलाई जोडे - Living with ICT
Home / Featured / शंकर उप्रेती, जसले मोबाइल एपबाट संसारका नेपालीलाई जोडे
शंकर उप्रेती, जसले मोबाइल एपबाट संसारका नेपालीलाई जोडे
Shiva Basnet Jul 26, 2017	2 Comments
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि अहोरात्र काम गर्ने यी युवा हुन्, शंकर उप्रेती । विदेशमा बसी नेपाली समुदायलाई योगदान पुर्याउने नामहरुमा उप्रेती छुट्ने कुरै भएन । उनले मोबाइल एपहरुमार्फत लाखौं नेपालीलाई जोडिरहेका छन् ।
‘हाम्रो पात्रो’ नामको मोबाइल एप तपाईंले पक्कै चलाउनुहुन्छ । यही एपकै कारण नेपालीमाझ उप्रेतीको वाहवाही बढिरहेको हो । साथमा हाम्रो किबोर्ड, नेपाली इंगलिस डिक्सनरी, हाम्रो न्युज एन्ड म्यागेजिनजस्ता लोकप्रिय नेपाली एप उनकै अग्रसरतामा बनेका हुन् ।
‘मैले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हाम्रो पात्रो बनाएँ । आज यही एप उपयोगी नेपाली एपहरुमध्ये सर्वाधिक सफल बनेको छ । अनि यो सफलतामा लाखौं नेपालीहरुको विश्वास र माया उत्तिकै मिलिरहेको छ,’ फेसबुक च्याटमा उनले सुनाए । यही कारण उप्रेतीले सिलिकन भ्यालीको प्रतिष्ठित आइटी कम्पनीको आकर्षक जागिर छोडे । अहिले हाम्रो पात्रोलाई पूर्णकालीन नेतृत्व गरिरहेका उनलाई नेपालको मोबाइल एप्स क्षेत्रका आइकन भन्दा फरक नपर्ला ।
६ एमबी साइजको हाम्रो पात्रो एपमा दर्जनौं सुविधा दिइएको छ । २३ लाखभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन् । यतिमात्रै कहाँ हो र ? युनिकोडमा नेपाली टाइप गर्न समस्या भइरहेका बेला उनले हाम्रो किबोर्ड बनाए, जसबाट जोकोहीले नेपालीमा टाइप गर्न पाएका छन् ।
बाराको सामान्य परिवारका उप्रेती स्कुलमा कहिल्यै दोस्रो हुनु परेन । सन् २००४ मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा कम्प्युटरमा बिई सक्दा पनि उनको नामअघि ‘टपर’ थियो । यसपछि उप्रेतीले ४ वर्षसम्म डा. रुद्रराज पाण्डेद्वारा सञ्चालित डिटुहकाईमा प्रोग्रामर भई काम गरे ।
यसपछि डिटुहकाईले नै उनलाई अमेरिकामा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्ने अवसर जुराइदियो । ७ कक्षासम्म कम्प्युटर नै नदेखेको मान्छेको जीवनले अमेरिका पुग्दासम्म अकल्पनीय छलाङ मारेको थियो ।
‘अमेरिकामा सुरुवाती दिनहरु राम्रै थिए । त्यसपछिका दैनिकी केही पट्यारलाग्दा बने । कारण के भने म नेपाली तिथिमिति र चाडपर्वबारे बेखबर बन्न पुगें । अरु नेपालीको पनि यो साझा समस्या थियो । अनि आफ्नै लागि नेपाली तिथिमितिसहितको मोबाइल एप सन् २०१० मा आइओएस संस्करणमा बनाएको हुँ,’ हाम्रो पात्रोको सुरुवाती कथा सुनाउदै उनले भने ।
पछि उनले हाम्रो पात्रोलाई एपस्टोरमै राखे । यो एपस्टोरमा दर्ता भएको पहिलो नेपाली एप बन्यो । विदेशमा रहेका नेपालीले निकै मन पराउन थालेपछि सन् २०१२ मा एन्ड्रोइड संस्करणमा पनि हाम्रो पात्र निर्माण भयो । आज स्मार्टफोन पारखी लाखौं नेपाली भाषीसँग हाम्रो पात्रो एप छ ।
उनलाई पैसाले नपुग्दो थिएन । तर, हजारौं डलरको जागिरभन्दा आफूले जन्माएको हाम्रोपात्रोलाई हुर्काउन सोचे । अनि सिमेन्टिक छोडेपछि पूर्णकालिन रुपमा हाम्रो पात्रोमै समर्पित भए ।
यो एप निर्माण भएको १८ महिनामै १ मिलियन डाउनलोड भयो । अहिले यो किबोर्ड १०औं लाख नेपालीले सजिलै चलाइरहेका छन् । अटो करेक्सनसमेत गरिदिने यो एपले नेपाली भाषाको विकास र प्रवद्र्धनमा योगदान दिएको उनको विश्वास छ ।
अमेरिकामा रहँदा आइटी कम्पनीमा फुल टाइम जागिरे हुँदाहुँदै उनले यस्ता एपहरु बनाए । सन् २०१५ सम्म उनी सिलिकन भ्यालीको चर्चित सेक्युरिटी सफ्टवेयर निर्माता सिमेन्टिक कर्पोरेशनका उच्च तहका जागिरे थिए । उनलाई पैसाले नपुग्दो थिएन ।
तर, हजारौं डलरको जागिरभन्दा आफूले जन्माएको हाम्रोपात्रोलाई हुर्काउन सोचे । अनि सिमेन्टिक छोडेपछि पूर्णकालिन रुपमा हाम्रो पात्रोमै समर्पित भए । उनले हालै हाम्रै पात्रोको नेपाल सब्सिडियरी कम्पनीका रुपमा काठमाडौंमा स्मार्ट आइडिया प्रालि खोलेका छन् ।
प्राविधिक यात्रा : डिटुहकाईदेखि सिलिकन भ्यालीसम्म
Previous नेपालमा मोबाइल ब्राण्ड : आउँदै हराउँदै (रिपाेर्ट)
Next अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय व्यवस्थापन सफ्टवेयर ‘जेफेड’को बेटा भर्सन सार्वजनिक
Yes lai sampurna Nepaliharukai safalta vanda farak naparla, agami dinma ni estai upayogi system ko abiskar hos. Thanks Shankar .
Shanker uprety bandhu,keep it up.
Hamro Patro is one of the best apps for we Nepali pupil.
It is very usefule and practical for us.